सुविधासम्पन्न बन्दैछन् प्रदेश-५ का स्वास्थ्य संस्था
स्वास्थ्य सेवा प्रदेश अन्तर्गत आएपछि प्रदेश–५ का अस्पताल सुविधासम्पन्न हुन थालेका छन् । धेरै रोगको उपचार प्रदेशमै हुन्छ । यी सुधारले प्रदेश सरकारको महत्वलाई स्थापित गराएको छ ।
तीन वर्ष अघिसम्म तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा दैनिक सुत्केरी हुनेको संख्या बढीमा १० जना थियो । दैनिक पाँच जनासम्म सुत्केरीको मात्र शल्यक्रिया सम्भव थियो ।
जम्मा चार जना चिकित्सक थिए । शल्यक्रिया कक्ष एउटा मात्र थियो । ‘पोस्ट अपरेटिभ वार्ड’ मा पनि जम्मा ६ वटा मात्र बेड थियो । वरिष्ठ प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. श्रीधर आचार्य भन्छन्, “भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावले चाहेर पनि पर्याप्त सेवा दिनसक्ने अवस्था थिएन ।”
अहिले अवस्था फेरिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईका अनुसार दैनिक २० जनासम्म सुत्केरीको शल्यक्रिया सम्भव छ । अस्पतालमा चार वटा शल्यक्रिया कक्ष बनिसकेका छन् ।
अहिले १६ जना चिकित्सक कार्यरत छन् । भट्टराई भन्छन्, “पहिला बेड संख्याको कमिले भर्ना लिन सक्ने अवस्था नै थिएन, कोही पनि सुत्केरी शल्यक्रिया नभएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छैन ।”
पछिल्लो दुई वर्षमा अस्पतालको मुहार नै फेरिएको छ । बिरामी आउने क्रम पनि बढेको छ । अस्पतालका अनुसार गत वर्ष १२ हजारले अस्पतालबाट सुत्केरी सेवा लिएका थिए ।
लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालको नव निर्मित भवनमा विरामीका लागि क्याविन बनाइदै, अस्पतालले ५० वेडको क्याविन बनाउन लागेको छ । तस्वीरहरु : मुकेश पोखरेल
अहिले पनि यो क्षेत्रका आगोले पोलेका बिरामी काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता छ । तर अब त्यो बाध्यता पनि अन्त्य हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आगोले पोलेकाको लागि छुट्टै वार्डको स्थापना गरिएको छ । भट्टराईका अनुसार अब केही दिनमा आगोले पोलेका बिरामीको उपचार शुरू हुनेछ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल मात्र होइन, दाङको तुल्सीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र बाँकेको नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा पनि सुधार भएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अनुसार रु.८ करोड खर्चेर आईसीयू, सिटीस्क्यान र भेन्टिलेटर सहितको सेवा विस्तार गरिएको छ ।
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे शल्यक्रियाको लागि बिरामीलाई बाहिर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको बताउँछन् । उनका अनुसार, प्रयोगशाला सुधार, डायलोसिस सेवाका साथै ब्लड ब्याङ्कको स्थापना पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी जीर्ण बनेको भेरी अस्पतालको मर्मत गरिएको छ । चर्केको भित्ता मर्मत गरेर रङरोगन गरिएको छ । बिजुलीको तार, पोल र पानीका धारालाई व्यवस्थित बनाइएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाका अनुसार ल्याप्रोसकोपी सर्जरीको लागि उपकरण, भेन्टिलेटर र अन्य सामग्री समेत राखिएको छ ।
प्रदेश–५ का १२ जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि सुधार गरिएको छ । अहिले सबै जिल्ला अस्पतालमा एम्बुलेन्स छन् । त्यस्तै शव राख्ने मर्चरी फ्रिज, भिडियो एक्स–रेको व्यवस्था छ । जुन सुविधा यसभन्दा अघि जिल्ला अस्पतालहरूमा थिएन ।
लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताल वुटवलको पुरानो भवन ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदेश अन्तर्गत रहने व्यवस्था भएपछि अस्पतालहरूमा देखिने गरी सुधार भएको छ । प्रदेश–५ सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा दुई आर्थिक वर्षमा रु.२० करोड खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको बजेटमा प्रादेशिक अस्पतालमा १५० शय्याको सुत्केरी भवन र डाइग्नोस्टिक भवन बनाउने तयारी छ । त्यसबाहेक आईसीयू कक्षमा ५० बेड थप्ने तयारी छ ।
राप्ती अस्पतालको सुधारका लागि प्रदेश सरकारले रु.८ करोड खर्च गरिसकेको छ । त्यसैगरी भेरी अस्पतालमा गत वर्ष रु.६ करोड खर्च गरेको थियो । भेरी अस्पताल संघीय सरकार मातहतमा भए पनि प्रदेश सरकारले सुधारका लागि बजेट दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले गएको वर्ष दिएको बजेट भौतिक पूर्वाधार सुधार र उपकरण खरीदमा खर्च गरिएको भेरी अञ्चल अस्पतालका मेसु डा. थापा बताउँछन् । “यस वर्ष पनि सुधार गर्नुपर्ने कामको लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेका छौं” डा. थापा भन्छन्, “के के सुधार गर्नुपर्ने हो, लेखेर पठाउनुस् भन्नुभएको थियो, सोही अनुसार पठाएका छौं, प्रदेश सरकारबाट चासो व्यक्त भएको छ ।”
अप्रेशन कक्ष ।
प्रदेश–५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल जनतालाई सहुलियत दरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारी अस्पतालहरूको सुधार थालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बजेट र सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुस् पैसा लगानी हामी गर्छौं भनेका छौं, बजेट योजना र प्रत्यक्ष निगरानी नहुँदा सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाह राम्रो नभएको पाएपछि सुधारमा ध्यान दिइएको हो ।”
प्रदेश सरकारसँग प्रत्यक्ष भेटेर आफ्ना समस्या, योजना र कार्यक्रम राख्न पाइने भएकाले सजिलो भएको सम्बन्धित अस्पतालका पदाधिकारी बताउँछन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष भट्टराई अहिले अस्पताल सुधारको योजना बनाउन सके मात्र पनि काम हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पैसाको समस्या छैन, मन्त्रालयमा जति वेला गएर भन्दा पनि हुन्छ, पहिला सानो सुधार र बजेटको लागि पनि १० पटक काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।”
प्रदेश–५ सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको छ । केन्द्रकै ठूला अस्पताल बराबर सुविधासम्पन्न बनाइने प्रदेश सरकारको योजना छ । अब अस्पतालमा १२०० शय्या हुनेछन् । डीपीआरका लागि टेण्डरको प्रक्रिया अघि बढेको सामाजिक विकास मन्त्री बरालले जानकारी दिए ।